crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Deegaankeenna | HimiloNetwork
Zakariya March 22, 2017	Leave a comment 1,423 Views
Muqdisho (Himiloews) – Sawirka kuu muuqda – wali ma is-weydiisay haddii ay is boodi karaan Geri iyo Farow? Sidee ayuuse u ekaan karaa ilmaha ka dhex-beerma? Waa maxayse magaca aad u bixin laheyd? Jawaabta ilaa hadda lama tilmaami karo. Xayawaanka kuu muuqda waxaa la yiraahdaa Okapi waxaana markii ugu horreysay lasoo ogaaday sanadkii 1901. In kasta oo saynisyahannadu ay sheegaan in ...
Zakariya December 15, 2016	Leave a comment 2,029 Views
Muqdisho (Himilonews) – Shinbiro inta badan dab-joog ah oo aan dhab u duulin; oo midabo kala duwan leh; diyaad, dooro; ama shinbirluki. Labkiisa waxaa la yiraahdaa Diiq; tan dhedigta ahna waxaa lagu magacaabaa Digaagad. Yaryarka digaaga waxaa la yiraahdaa Jiijiil. Midda aan wali curan waxaa la yiraahdaa Boojaal. Dul-fariisadka shinbiruhu ay ugxantooda ku dul-fariistaan ooy u kululeeyaan taniyo inta ay ...
Zakariya December 15, 2016	Leave a comment 1,064 Views
Muqdisho (Himilonews) – Bahal ku qoys ah Yeyda ama Uuleyda oo dadka la dhaqma. Wuxuu galaa adeegsi oo, iyada oo laga eegayo sifooyinkiisa garasho iyo wax urisnimo, dunida horumartay waxay u adeegsadaan baaritaannada. Waxa sharciga ka noqday dunida qaar waa in tusaale ahaan gobal kamid ah Maraykanka saraakiisha booliska loo ogol yahay inay qaniini karaan Ey qeylinaya si ay u ...
Zakariya December 15, 2016	Leave a comment 1,100 Views
Muqdisho (Himilonews) – Bahal yar oo kamid ah dhirxagatada oo leh dhego waaweyn iyo dabo dheer; Doolli. Waxay badi ku dhaqmaan saqafyada aqallada, godadka iyo hareeraha jikooyinka. Culeyskoodu waa culaab dhan 19 garaam. Cimri dhererkoodu wuxuu gaaraa laba sano. Sidkooda waxaa loo shintiriyaa 20-maalmood. Dhedigta Jiirka waxay ku uureysan kartaa da’da laba bilood. Waxyar kadib 48-saac gudahood kadib dhalmadooda, waxay ...
Wax kabaro Bisadda
Zakariya December 12, 2016	Leave a comment 1,761 Views
Muqdisho (Himilonews) – Naflay yar oo dhogor jilicsan oo hebed ah oo dadka la dhaqanta; Dinnad, Mukulaal, Yaanyuur, Waxaa jira in ka badan 500 oo malyuun oo Mukulaalo ah oo rabaayado ah. Waxaana jira ku dhawaad 40 unug-dhamays oo Yaanyuurro ah dunida dacalladeeda- Waxayna Bani’aadmiga la dhaqmeen ku dhawaad 10,000 oo sano. Waxay 24-kii saacba seexan karaan ku dhawaad 13-14 ...
Zakariya December 7, 2016	Leave a comment 1,618 Views
Muqdisho (Himilonews) – Iduhu waa labada fir ee Arigu u qeybsamo marka laga soot ago Riyaha; waxay leeyihiin dhogor badan; harag idiin laga dhigo iyo caano; waana cala-naqsataa. Labka waxaa la yiraahdaa Wan; halka dhedigtana lagu magacaabo Lax. Dhasha yaryarka ah ee Idaha waxaa lagu magacaabaa Neylo ama Baraar. Neefka dhedig ee Idaha ah oo aan wali curan waxaa la ...
Zakariya December 7, 2016	Leave a comment 1,516 Views
Muqdisho (Himilonews) – Ari-cadku waa xoolaha mid la bah ah Idaha. Labkiisa waxaa la yiraahdaa Orgi; halka tiisa dhedigta ahna lagu magacaabo Ri. Dhedigta aan geesaha lahayn ee Ari-cadka waxaa la yiraahdaa Seenyo ama Garoon. Dhasha Ari-cadka waxaa lagu magacaabaa Waxaro. Halka lagu xereeyo Waxaraha waxaa la yiraahdaa Edeg. Cimrigeedu wuxuu gaaraa inta u dhaxeysa 15 ilaa 18 sanadood. Waxay ...
Zakariya December 7, 2016	Leave a comment 2,985 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xoolaha dadku dhaqdo jaadadkiisa jaadka ugu waxtarka badan mid kamid ah oo cala-naqsata; waxay leedahay calool afar qeybood ah, geeso dhexda ka daloola iyo qoobab; qaarkeed tuur ayay leedahay; waxtarkeeda waxaa kamid ah; hilib, harag, caano, subag, waxyaabo la isku daweeyo iyo waxyaalo kale oo badan; geeso, lafo, mergiyo, sayn, uus iwm oo mid kasta waxtar gaar ahi ...
Zakariya December 7, 2016	Leave a comment 3,216 Views
Muqdisho (Himilonews) – Xoolaha la dhaqdo kan ugu laxaadka weyn; wuxuu leeyahay sur aad u dheer, kurus ama laba kurus, addimo dheerdheer iyo cago balbalaaran; wuxuu muddo ka qadi karaa biyaha; waxtarkiisa kalana lama soo koobi karo; waa la rartaa, waa la fuulaa; waa la maalaa; hilib, subag, xuuko, harag laga sameysto lammooyin, kabo, abxado, kolayo, xarko, dhogor laga dhigto ...
Zakariya December 7, 2016	Leave a comment 4,500 Views
Muqdisho (Himilonews) – Baqashu waa jaad Gamaanka kamid ah oo ku yimaada is boodka iyo kudaalka labada xubnood ee ugu weyn qoyska reer Gamaan oo ah Dameeraha iyo Fardaha. Inta badan labka Dameer ayaa booda Geenyada – ama Faraska ayaa booda dhedigta Dameerka. Iyada oo laga eegayo kasoo dhex-baxa labada unug ee faras-dameerka, Baqashu waxay sifooyin isku filan ka dhaxashaa ...
Biyaha Faraxalka iyo Suuliga hadda dib ayaa loo isticmaalayaa!
Laba nin oo loo xiray badbaadinta Badbaadiso Show loo sameynayay.